Richard Stallman Anopa Kurudziro Yekutungamira Nhaurirano muGNU Nharaunda | Linux Vakapindwa muropa
Richard Stallman akagadzirira mazano ekutaurirana kwakanaka mune chirongwa cheGNU, iyo GUU Yekutungamira Nongedzo.
Makodhi ehunhu ayo anozivikanwa munzvimbo dzakasiyana siyana ari muchimiro chemitemo ine kutyorwa kunotakura chirango.
Richard Stallman haidi kuda kumanikidza imwe mhando yehurongwa, saka, pane kupa ratidziro yakajeka yezvinobvira uye zvisingaiti, yakagadzira kurudziro yakajairika inoratidza kuti nharaunda inofarira nzira yekutaurirana ine hushamwari.
Nerubatsiro rweaya mazano, iwe unogona kubva waburitsa pachena munzira yekuita hunhu uye kubatsira mutori chikamu kuita kuti kutaurirana kwavo kuve neushamwari, pasina kumirira kukakavara kana kutuka kwakanyanya kuti kuonekwe pachikonzero icho munhu chaanogona kupomerwa anotora chikamu achiputsa mitemo.
Richard Stallman anovimba kuti kurudziro, panzvimbo pezvinodiwa zvakanyanya uye zvinorambidzwa, zvinobatsira kuita kuti hurukuro dzive dzakadzikama uye dziite zvakanyanya kune vese vatori vechikamu.
Nekusanganisira Stallman, kurudziro idzi dzinokwezva vakadzi vazhinji kunharaunda, iye achipesana nekumanikidza pfungwa kuti uwane "runyararo munharaunda" munharaunda.
1 Richard Stallman anoda kutora nyore
1.1 Iyo GNU chirongwa inogamuchira nhungamiro yekutaurirana kwakanaka
Richard Stallman anoda kutora nyore
Izvo kurudziro ivo pachavo sarudza kuvhurwa kweprojekti yeGNU kutora mukana kweumwe munhu anofarira kuvandudza chirongwazvisinei nehunhu hwako, rudzi, chitendero, tsika, maonero ezvematongerwo enyika, kana chero humwe hunhu hwevanhu.
Iyo purojekiti haigamuchire nzira yekushamwaridzana uye isina hunhu yekutaurirana, inokumbira kubata vamwe vatori vechikamu neruremekedzo, kwete kutsoropodza chero chinhu, kushivirira zvikanganiso, kwete kupindura pakurwiswa nechisimba chemashoko uye kwete kusimudzira nhaurirano dzezvematongerwo enyika.
Yakasimudzirwa nhaurirano pamusoro peMitemo yeKufambisa paLinux uye mamwe mapurojekiti, iyo GNU Project ikozvino inogamuchira nhungamiro yekutaurirana.
Mirau yakaoma haifanire kuitwa pachena, akafunga muvambi weprojekiti Richard Stallman.
Iyo GNU chirongwa chichava nemanongedzo ehukama kutaurirana mune ramangwana.
Izvi zvinozivisa mutungamiri weprojekiti uye muvambi wesangano reFree Software Richard Stallman pane chirongwa chekutumira tsamba.
"Pachinzvimbo cheGNU Project, ndinokumbira vese vanopa rubatsiro veGNU kuti vaite napose pavanogona napo kutevedzera nhungamiro idzi panhaurirano dzeGNU Project," anonyora Stallman.
Iyi nhungamiro nyowani inogona kuve nemhinduro yakananga kunhaurirano dzakanangana nekuunzwa kweMitemo yeKufambisa, muLinux kernel, kunyangwe Stallman inongoreva zvisina kunangana.
Sekureva kwaStallman, izvi zvakakonzera nhaurirano pakati pevachengeti veGNU, umo vamwe vaida kuti kuitwe kodhi yekuzvibata - vamwe vakatyisidzira kusiya chigaro, kodhi yekuzvibata inofanirwa kuunzwa muchirongwa cheGNU.
Iyo GNU chirongwa inogamuchira nhungamiro yekutaurirana kwakanaka
Mushure mekubvunzana nevazhinji vatori vechikamu iwo madhairekitori matsva akagadzirwa, ayo akanyorwa zvakanyanyisa, maitiro api aikodzera kukurukurwa pane tsamba dzekutumira, uye mapato api anofanirwa kutarisisa akanakisa.
Musiyano nekodhi yemafambiro ndiyo nzira yekutanga yekugadzira nharaunda umo vese vatori vechikamu vanonzwa kugadzikana uye vachida kupa muprojekiti.
Somuenzaniso, Bumbiro reMitemo rine mitemo yakajeka pamwe chete nezvirango zvinoenderana nezvikanganiso uye nekudaro inzira yakasarudzika yekudzidzisa vanhu kuzvibata zvakasiyana.
Zvakare, aya marudzi emitemo haatungamire kune hunhu hwakanaka, uhwo hunopfuura mitemo yakamisikidzwa. Nekudaro, iwo marongero ekutaurirana eprojekti yeGNU anofanirwa kukwanisa kuzadzikisa chaizvo izvo zvekupedzisira, ndokuti, ita kuti vanhu vataurirane kune mumwe neumwe nenzira ine hushamwari.
Izvi zvaizozadzikiswa kuburikidza nerudzi rwemaitiro ekudzidza umo vatori vechikamu vaitungamirirwa nhungamiro nyowani.
Stallman anonyora kuti anotarisira kuti nhungamiro idzi dzinotungamira mukukurukurirana kwakadzikama muchirongwa, vatsva vatsva vanonzwa vanogamuchirwa uye kuti hurukuro dzinoshanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Stallman anopa kurudziro yekutungamira hurukuro munharaunda yeGNU
Maitiro ekuisa Android Studio paLinux nerubatsiro rweFlatpak?